SSRF को धूपबाट कसरी विभूति बनाउने र संकलित गर्ने ?
SSRF ले शारीरिक अनि मानसिक रोगको उपचारको लागि आध्यात्मिक उपचारको साथै पारम्परिक चिकित्सा उपचार सुरु राख्ने सल्लाह दिन्छ ।
पाठकहरूलाई कुनै पनि आध्यात्मिक उपचारको उपाय अपनाउनु भन्दा अगाडी आफ्नो विवेकको उपयोग गर्न सल्लाह दिर्इन्छ ।
१. परिचय विभूति कसरी बनाउने
SSRF को धूपबाट प्राप्त पवित्र विभूति एउटा धेरै राम्रो र सजिलो स्वयं-सहयोगी आध्यात्मिक उपचार हो जुन नियमित रूपमा सकारात्मक उर्जा प्राप्त गर्नुको साथ-साथै भूतहरू (राक्षस, शैतान, नकारात्मक उर्जाहरू आदि) बाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । SSRF को धूप जलाएर प्राप्त खरानी पवित्र हुन्छ किनभने :
SSRF को धूप सात्विक सामग्रीहरूबाट बनाएको हुन्छ र जलाउँदा तिनीहरू आग्नि तत्तव (Absolute Fire Principle) को सम्पर्कमा आउँदछ । यसैले, सात्विक सामग्रीको साथसाथै अग्नि तत्तवले अन्य निर्जीव वस्तुहरुको तुलनात्मक उच्च सात्विक खरानि उत्पादन गर्दछ त्यसैले पवित्र विभूति भनेर चिनिन्छ ।
यसले ईश्वरको विशिष्ट पक्ष (देवताको सिद्धान्त) समावेश गर्दछ जुन SSRF को धूपमा प्रयोग गरिएको विशेष सुगन्धले आकर्षित गर्दछ । त्यसकारण यो खरानी संकलन र भण्डार गर्न उत्तम हुन्छ ।
लेखहरुको सन्दर्भ लिनुहोस् :
‘आध्यात्मिक उपचार गर्नको लागि SSRF को धूपको विशेषता के हो?’
‘आध्यात्मिक उपचारको सिद्धान्तहरू‘
२. SSRF को धूपबाट पवित्र खरानी (विभूति) कसरी बनाउने तथा संकलन गर्ने ?
पवित्र खरानी बनाउन तपार्इलाई आवश्यकता पर्दछ:
एउटा SSRF को धूप
एउटा धूप राख्ने भाडा
पवित्र खरानी संकलन गर्न थाल
अधिकतम लाभ प्राप्त गर्नको लागी सम्पूर्ण प्रक्रिया गर्ने समेय अत्यधिक श्रद्धको साथ गर्नुहोस् किनकि तपाई आध्यात्मिक उपचारमा सहयोग पुर्याउनको लागि परमेश्वरको एक विशिष्ट पक्षलार्इ आवहान गर्नुहुन्छ । कार्य, विचार र मनोवृत्ति यस्तो बनाउनुहोस् कि वास्तवमा तपार्इले ईश्वरको उपस्थिति अनुभव गर्नसकोस् ।
प्रार्थना गरेर सुरु गर्नुहोस् कि SSRF को धूपको विशेष सुगन्धले आकर्षण गरेको र्इश्वरको विशेष तत्तव अधिकतम क्षमतामा प्रप्त गर्नसकोस् ।
बक्साबाट एउटा SSRF को धूप लिनुहोस् र माचिसको सहायताले धूपलार्इ जलाउनुहोस् ।
त्यसपछि जलेको धूपलार्इ, धूप जलाउने भाडामा राख्नुहोस् ।
सामान्य एउटा SSRF को धूप पर्णरुपमा जल्नको लागि ४०-४५ मिनेट लाग्दछ ।
धूप जलिसके पछि, पवित्र खरानी (विभूति) लाई तपाईको दाहिने हातले जति सक्दो छिटो भविष्यमा प्रयोग गर्नको लागि सफा भाडामा जम्मा गर्नुहोस् ।